Wadada xiriirisa Jowhar iyo degmada Mahadaay oo Go'day
Monday June 10, 2019 - 08:53:58 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Wararka laga helayo Gobolka Shabeellaha dhexe ayaa waxaa ay sheegayaan in Wabiga Shabeelle uu fatahaad xoogan uu ka sameeyay deegaano u dhow Magalada Jowhar ee Xarunta gobolkaasi Shabeellaha Dhexe.
Wadada isku-xirta Magaalooyinka Jowhar iyo Mahadaay ayaa la sheegay in Wadada u dhaxeysa uu gooyay fatahaada Wabiga Shabeelle,waxaana istaagay isku-socodka dadka iyo Gaadiidka.
Sidoo kale Fatahaada uu sameeyay Wabiga Shabeelle ayaa waxaa uu baabi’iyay Dhul beereed ku yaalla Gobolka Shabeellaha Dhexe oo qaarkood ay ku yaalleen dlagyo kala duwan.
Deegaanada uu saameeyay Wabiga Shabeelle ayaa waxaa ka mid ah deegaanada Xaanshooley iyo Lebiga oo u jira magaalada Jowhar wax yar ka 3km, iyada oo dadkii ku noolaa qaarkood inay ka barakacaan si uusan saameyn ugu yeelan fatahaada Wabiga.
Sanadkasta markii la gaaro xilliyada Roobka ayaa waxaa Wabiga Shabeelle uu sameeyaa fatahaad kala duwan taas oo saameyn ku yeelata badi dadka ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe.